Deynta sawirka: Ryan Stopera
Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay ku faraxsantahay inay soo dhaweyso DeAnna Cummings oo ah agaasimaha barnaamijka Arts-ka cusub. Isku soo wada duuboo waa iskuxirid iyo maamulaha shirkadda Farshaxanada isboortiga (JXTA), waa ganacsi shirkadeed bulsho oo kuyaal woqooyiga Minneapolis oo tababaro una shaqaaleysiiya dhalinyaro taariikhi ah oo aan la qiyaasi karin inay yihiin guga loo maro waxbarashada sare iyo xirfadaha farshaxanka iyo naqshada.
Laga bilaabo Juun 1, 2020, Cummings wuxuu hogaamin doonaa McKnight's Barnaamijka farshaxanka, which supports working artists to create vibrant communities. She will join Arleta Little, Arts program officer and director of artist fellowships, Sarah Lovan, Sarkaal barnaamijka barnaamijka Fanka, iyo Latosha Cox, maamulaha barnaamijka barnaamijka. Kristen Marx, maamulaha barnaamijka Farshaxanka, ayaa dhowaan ka tegay McKnight si uu u baadi goobo fursado kale. Waxaan uga mahadcelineynaa toddobada sano ee ay xubin muhiim ka aheyd barnaamijka farshaxanka waxaanan u rajeyneynaa wanaag sida ugu wanaagsan.
Sanadka 2019, Mu'asasada ayaa gudoonsiisay 181 deeqo oo dhan $10.1 milyan oo lagu taageerayo farshaxan yaqaanayaasha ka shaqeeya aaminta in Minnesota ay sii fiicnaato markii farshaxannadeedu wanaagsanaadaan. Farshaxannadu waxay kobciyaan aqoonsigeenna dhaqameed, waxay xalliyaan xalalka, iyo waxay xalliyaan isbeddellada bulsheed. Mu'asasada 'McKnight Foundation' waxay maal gashaa fanka iyo waaxyaha kale si ay u taageeraan farshaxanada shaqada ee Minnesota waxayna u doodaan qiimaha shaqadooda.
“DeAnna muddo sanado ah waxay hoggaamiye maxalli ah ka ahayd hoggaamiyeyaasha maxalliga ah, McKnight wuxuu muddo dheer u ololeynayay iyo maalgeliye JXTA,” ayay tiri Pamela Wheelock, madaxweynaha ku-meel-gaarka ah ee McKnight. "Waxaan ku faraxsanahay go'aanka DeAnna ee ku soo biiritaanka McKnight waxaanan rajeyneynaa inaan aragno kartideeda iyo aragtideeda oo ku daraya barnaamijkeena Arts-ka ee adag."
Saldhigyada Waqooyi, Saamaynta Faafin
Cummings iyo saaxiibbadeeda JXTA-isku xidhka — Roger Cummings (ninkeeda) iyo Peyton Russell — dhammaantood waxay ku xidhnaayeen woqooyiga Minneapolis. Aqoonsiga in dhalinyarada kartida leh ay had iyo jeer dareemaan in ay ka garteen oo ay ka ceyriyeen xarumihii waxbarasho ee caadiga ahaa, waxay aasaaseen JXTA 1995, sidii barnaamij farshaxan oo iskuulka kadib ah xaafada Sumner-Glenwood ee North Side. Labaatankii sano ee soo socda JXTA wuxuu koray inuu noqdo mid ka mid ah xarumaha dhaqamada ee ugu muhiimsan Magaalooyinka Mataanaha ah.
Deynta sawirka: Nancy Musinguzi, xurmada farshaxanka Juxtaposition
Deynta sawirka: Justin Sengly, xurmada farshaxanka Juxtaposition
Maanta JXTA waa baraha bulshada, maadaama milkiilaha seddex dhisme ku leeyahay mid ka mid ah isgoysyada ugu mashquulka badan waqooyiga Minneapolis: Emerson Avenue North iyo West Broadway Avenue. Waxay caan ku tahay qaran ahaan qaab farshaxanimo naqshadeyn iyo naqshadeyn xoog shaqaale, iyadoo ay ka shaqeeyaan in kabadan 100 qof sanad walba, gaar ahaan dhalinyarada maxalliga ah. Sanadkii 2018 JXTA wuxuu bilaabay hawshiisi ugu weyneyd welina — afar sano, $14 milyan olole caasimadda ah oo uu McKnight ugu yaboohay $1.3 milyan.
“Shaqadayda oo dhan waxay diirada saareysay sida farshaxanku u kaxayn karo sinaanta loona dhiso bulshooyinka kobcaya. Waxaan arkaa isweydaarsi balaaran oo u dhexeeya meelaha diirada lagu saarayo ee McKnight iyo qiimahayga, aragtidayda, iyo qibradeyda. ” —DEANNA CUMMINGS
Hoggaamiye istiraatiiji ah oo rajo wanaagsan, Cummings ayaa ku qaatay howlaheeda shaqo hagidda JXTA iyada oo loo marayo koritaanka deg deg ah ee laga soo bilaabo urur kooxeed ilaa awood la taaban karo ee horumarinta dhaqaalaha, dib-u-nooleynta deriska, u sinnaanta fanka, iyo waxbarashada dhalinyarada iyo xoojinta. Waxaa si weyn loogu ixtiraamaa shaqadeeda ku saabsan meelaynta hal abuurka — hab ay xubnaha bulshada, fanaaniinta, iyo daneeyayaasha kale ay u isticmaalaan farshaxanka iyo istiraatiijiyad dhaqameed si ay u fuliyaan isbedelka hogaamiya bulshada.
Cummings ayaa yidhi: "Mowqifkani waxa uu ii oggolaanayaa in aan ballaariyo saamaynta aan ku leeyahay baaxadda shaqadeyda hadda jirta." “Shaqadayda oo dhan waxay diirada saareysay sida farshaxanku u kaxayn karo sinaanta loona dhiso bulshooyinka kobcaya. Waxaan arkaa isweydaarsi balaaran oo u dhexeeya meelaha diirada lagu saarayo ee McKnight iyo qiimahayga, aragtidayda, iyo qibradeyda. ”
Kahor cillad-xumada JXTA, waxay u shaqeysay sarkaal barnaamijka barnaamijka Xarunta Fanka ee Magaala-weynta iyo agaasime sare oo ka tirsan Golaha Mad-habta Madowga, tan iyo markii loo magacdaray Council for Minnesotaotans of African Heritage.
DeAnna iyo Roger Cummings waxay ka hadlaan munaasabadda kicinta ee ololaha 'Juxtaposition Arts'. Sumcadda sawirka: Molly Miles
Cummings wuxuu ka soo shaqeeyey guddiga aasaasiga ee Bush Foundation ilaa 2013. Iyadu waa 2016 Minneapolis / St. Paul Business Journal Haweenka Ganacsiga ayaa ka awardee iyo Halyeeyada Farshaxanka Minnesota ee 2013. Laga soo bilaabo 2016 illaa 2018, waxay ahayd Machadka DeVos Fellow ee barnaamijka xulashada xulashada ee maaraynta farshaxanka ee Jaamacadda Maryland, College Park. Waxay ka qaadatay shahaadada koowaad ee maamulka guud ee jaamacadda Harvard University waxayna ka baratay cilmiga bulshada iyo cilmu-nafsiga Jaamacadda Jaamacadda Minnesota.